Amanzi Konke - Kitchenware.com
Ininzi yethu ayikwazi into yokuba kuthetha ukuthini ngokwenene ukoma. Sinamanzi amaninzi okusela - nangona amanzi angasese angasese ahlambulukile!
Kodwa abantu abaninzi kwihlabathi abanalo i-luxury. Nsuku zonke, malunga ne-1 abantwana bakwa-400 bafa kwizifo ezibangelwa ngamanzi angaphephile kunye nococeko olulungileyo. Le nyaniso ayifanele ibe se2018 ...
Zikhona izisombululo ezilula ezifana nemithombo edibeneyo, i-spring protects kunye ne-BioSand iifayile ezikunceda ukubonelela ngamanzi acocekileyo kwiindawo ezijikelezayo kwihlabathi. Yiyo kanye into eyenziwa nguMbutho weCharityWater.
Indawo yakho www.outilsdecuisine.com wagqiba ekubeni atyalole kule nkalo kwaye axhasane neCharityWater ukubonelela ngamanzi okusela kubo bonke.
Yiyiphi ikhonkco phakathi kwe-Outilsdecuisine.com kunye nolo luthando?
Akukho nxu lumene ngalunye (akukho mbambiswano), kodwa wonke umntu uyazi ukuba ukupheka kwamanzi kuyimfuneko!
Ingaba uhlamba izixhobo zakho zekhitshi, ukutshisa ukutya kwakho (ngoko uzama ukupheka i-pasta epanini elingenanto!), Okanye ngenxa yeziqhamo kunye nemifuno ngokwabo, engenawo amanzi, unokutshiza ...
Kuninzi ngokuqhelekileyo phakathi kwamanzi kunye nesayithi lethu, kodwa kusobala ukuba imfuno yamanzi iya phambili kunoko, kubalulekile nje ukuba uphile, ukuze uphile (cela uMike Horn!). Amanzi okuhlamba, amanzi okupheka, amanzi okusela, kunye namanzi amaninzi okusela ukuphepha izifo ezininzi ...
Kunokwenzeka ukuba uphile ngaphandle kokutya kodwa akunakwenzeka ukuba uphile ngaphandle kokusela! Ngenxa yokuba umzimba awukwazi ukubamba ukugqithwa okungaphezulu kweentsuku ze-3 ukuba unqatshelwe amanzi. Silahlekelwa ngama-2 amitha wamanzi imihla ngemihla ngokuphefumula, ukuphefumula nokukhutshwa komchamo.
Ewe, sonke sinemali eyahlukileyo, sonke sinemithetho efunekayo yokuhlawula, ikhefu ukuba silungiselele abantwana bethu (abo banako), sonke sicinga ngokuqala ngathi kunye nakwiindawo esikuyo ngaphambi kokucinga ngabanye, kodwa nokuba sinokunika kuphela ii-euro ezimbalwa kufuneka kwenziwe! Ayinakuguqula ubomi bethu kodwa iya kutshintsha ubomi babantu abaninzi kwindawo ethile ehlabathini ...
>> I-5% yenani le-oda ngalinye elibekwe kwisayithi yethu linikezelwa kwiNcedo loMlambo.
I-100% yemali ithunyelwe kwi-Charity Water iya kusetyenziselwa ukwakha iiprojekti zamanzi okusela, kwaye xa zigqityiwe, i-CharityWater izothumela iifoto kunye ne-GPS ukulungelelanisa ukuze sikwazi ukubona ngokucacileyo oko siye sabenelela kuyo, bonke kunye (ngokuqhelekileyo iinyanga ze-21 emva kokuphela kwephulo, kwaye ewe ayakhayo loo nto!). Ukufumana ingcamango ongayijonga kwimephu yeeprojekthi ezityiwe (https://www.charitywater.org/our-projects/completed-projects/).
Ukuba siyeke imizuzu embalwa kule ngxaki yamanzi kwaye ucinge ukuba ngolunye usuku siya kufumana wonke umntu ohlala kulo mhlaba ukuba abe nokufikelela kumanzi okusela, kwaye uya kufumana ukuba ngaphezu kokusindisa Ubomi esiya kutshintsha umhlaba ngokubanzi: abantwana abaya esikolweni kunokuba bathathe amanzi ngabantwana abangakwazi ukwakha uluntu olungcono, baya kuvumela amazwe abo ukuba akhule, akhule, Ngaphantsi kobuhlwempu, i-exodus, iimfazwe ezingaphantsi (kuya kuba ngeliso ngezinye izizathu) .... le nto (eyenziwe lula) mhlawumbi ivela ngaphandle kodwa inelungelo!
Siyabonga ukuba uthathe ixesha lokufunda kum, kwaye ukuba banikele ngenxa yesi sizathu (ngokusebenzisa umyalelo wakho), mbulela ngoncedo lwakho kunye noluntu lwakho.
Ukuba unemibuzo unganqikazi ukudibana nathi contact.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neCharityWater, uqonde umsebenzi wayo kunye nomthombo wamanzi, bukela le vidiyo:
Cofa apha ukuze ufunde ngokubanzi ngamanzi e-Charity kwaye ubanike umnikelo ngokuthe ngqo.